UK ayaa kordhinaysa gargaarka ay siiso Yemen oo noqonaya £100 milyan - BBC News Somali
UK ayaa kordhinaysa gargaarka ay siiso Yemen oo noqonaya £100 milyan
22 Sebtembar 2016
UK ayaa kordhinaysa gargaarka bini'aadanimo ee ay siiso Yemen si ay u caawiso malaayiin qof oo ay saamaysay dagaalka ka socda, ayay sheegtay Xoghayaha Horumarinta Caalamiga Priti Patel.
Waxay u sheegtay BBC in dowladda ay bixin doonto £37 milyan oo dheeraad ah sanadkan, taasoo ka dhigaysa guud ahaan lacagta £100 milyan.
Arrintan ayaa timid iyadoo UK lagu dhaleeceeyay inay hub ka iibiso Sacuudi Carabiya, oo loo isticmaali karo dagaalka ka socda Yemen ee uu Sacuudigu hogaaminayo.
Ms Patel ayaa sheegtay in UK ay leedahay siyaasad lagu ilaaliyo hubka la iibinayo.
Sanadkii hore dowladda Britain ayaa ansixisay hub qiimahiisu ka badan yahay £3bn oo laga iibiyay Sacuudi Carabiya.
In ka badan sanad, isbahaysi milatari oo uu hogaaminayo Sacuudiga, oo taageero ka helaya UK ayaa weeraraya mucaaradka Yemen, si ay u soo celiyaan dowladda Yemen oo xilka laga qaaday 2014.
In ka badan 3,000 oo rayid ayaa ku dhintay dagaalka, malaayiin kalena waxay ka qaxeen guryahoodii.
Dagaalka ayaa dalka Yemen oo ka mid ah waddamada ugu saboolsan Bariga Dhexe u keenay cunto yari.
Image caption Xoghayaha horumarinta caalamiga ee UK Priti Patel
Iyadoo ka hadlaysa Qaramada Midoobay ee New York, Ms Patel ayaa BBC u sheegtay : " Dadka ayaa ku jira xaalad xun. Ma haystaan biyo, waxaa jira dhibaato caafimaad, carruurta ayaa dhimanaysa, waxaa jira baahi loo qabo cunto iyo hoy."
Waxay intaas ku dartay in 19 milyan oo qof dalka Yemen inaysan haysan biyo iyo musqulo, halka 80% dadka ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo.
'Iska soo horjeed'
£100 ka milyan ee ay UK ugu talagashay sanadkan Yemen ayaa ka dhigaya waddanka afraad ee bixinaya deeqda ugu badan.
Wariyaha BBC ee arrimaha diblomaasiyadda James Landale, ayaa sheegay inay jirto arrin ka soo horjeeda deeqda bini'aadanimo.
"Hal gacan ayay Britain ku siinaysaa deeq badan Yemen. Laakiin, gacan kale ayay sidoo kale kaga iibinaysaa hub badan Sacuudiga oo sida ay xildhibaanada qaar sheegayaan, loo isticmaalo weeraro jabiyay sharciga caalamka ee bini'aadanimada iyadoo la beegsaday iskuulo iyo isbitaalo."
Xoghayahii hore ee horumarinta caalamiga, Andrew Mitchell, ayaa sheegay in arrimahan iska soo horjeeda macnaheedu yahay, in dowladda ay u baahan tahay inay wax wayn ka qabato inay cadaadis saarto Sacuudiga.
Dowladda ayaa ku adkaysanaysa inay cadaadis saarayso Sacuudiga si ay u baarto eedeymaha loo soo jeediyay.
Bishii hore Oxfam ayaa ku eedeysay dowladda UK, inay iska indhotirayso hubka ay ka iibisay Sacuudiga in loo isticmaali karo Yemen.
Waqtigaas, afhayeenka dowladda ayaa sheegtay inay ku qanacsan yihiin, in heshiiska hubka ee Sacuudiga uu waafaqsan yahay sharciyada UK ee hubka lagu iibiyo
Image caption Maleeshiyo taageersan Xuutiga Yemen, oo doonaya inay dowladda Yemen ridaan